Yaasiin Farey: Ma jirto wax nagu kallifaya inaan ka been sheegno xaaladda Rooboow | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii Yaasiin Farey: Ma jirto wax nagu kallifaya inaan ka been sheegno xaaladda...
Yaasiin Farey: Ma jirto wax nagu kallifaya inaan ka been sheegno xaaladda Rooboow
Muqdisho (Dalkaan.com) – Ku-simaha agaasimaha hay’adda Nabad-Sugidda iyo Sirdoonka ee NISA Gaashaanle Sare Yaasiin Farey ayaa beeniyay hadal ay ehellada Mukhtaar Rooboow ku sheegeen in warbixinta uu kasoo saaray xaaladdiisa ay tahay mid aan sax aheyn.
Yaasiin Farey oo wareysi siiyey VOA ayaa sheegay in Mukhtaar Rooboow uu ku sugan yahay guri ku dhexyaalla xarunta NISA, amnigiisuna uu sugan yahay, isagoo intaas ku daray in mas’uuliyadda ugu badan ee NISA ay tahay in isaga la ilaaliyo.
Yaasiin Farey ayaa sidoo kale sheegay inaysan jirin caafimaad darro ama culeys gaar ah oo heysata Mukhtaar Rooboow.
Isagoo ka hadlayay kuwa ay yihiin shuruudaha aanu buuxiin Mukhtaar Rooboow, waxa uu Gashaanle Sare Yaasiin Farey sheegay “In haddii qofka la wanaajiyo aysan ka dhigneyn inuu shuruudaha uu wada buuxiyay.”
Waxaa kale oo uu sheegay Gaashaanle Sare Yaasiin Farey in Mukhtaar Rooboow oo la sii daayo ay ku xiran tahay isaga iyo dowladda guud, sida uu hadalka u dhigay.
Ehellada Mukhtaar Robow, ku-xigeenkii hore ee ururka Al-Shabaab oo muddo saddex sano ah u xirnan dowladda Soomaaliya ayaa beeniyey hadal kasoo baxay ku simaha hay’adda Nabadsugidda iyo Sirdoonka ee NISA Gaashaanle Sare Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud (Yaasiin Farey).
Yaasiin Farey oo ka jawaabayay dalab la xiriiray xaaladda Rooboow uu uga yimid wasiirka Amniga Qaranka Cabdullaahi Maxmed Nuur ayaa jawaabtiisa ku sheegay in Roobow uu halis ku yahay bulshada iyo inay si joogto ah ugu yimaadaan, soona boqodaan qoyskiisa, xaaskiisa iyo ciddii kale ee uu dalbado.
Deg Deg RW Rooble oo ka yaabsaday Kooxda Farmaajo & Saciid...
”HADAA DIINTA ISLAAMKA KA BAXDID DIINTU KUU DHUTIN MAYSO”
TIJAABO 8-TODOBAAD QAADATAY & QIIMAYN RASMI AH?
Barcelona oo u soo bandhigtay Franck Kessie heshiis shan sano ah
Barcelona oo 60 milyan Ginni uga Doonaysa Leeds United ciyaaryahanka Raphinha?
DEG DEG: Wasiir Beyle oo diiday go’aankii loogu yeeray ee ka...
Qoor Qoor iyo xildhibaano Baydhaba u tegaya hadalkii carada ahaa ee...
Manchester United oo Mauricio Pochettino xidhiidh lasamaysay iyo go ‘aankii...
Wararkii ugu dambeeyey weerarkii lagu qaaday ciidanka AMISOM ee Xero Maslax